Iimali zenzalo FXCC
Ikhaya / Trading / I zixhobo ze Forex / Umgangatho wenzala
Izinga lentlawulo yesiseko kwiibhanki eziphambili zinokuchaphazela kakhulu ukusebenza kworhwebo. Kule tafile siye sanikezela uludwe olubanzi lwazo zonke izisiseko zeesiseko eziphambili, ezinxulumene nazo zonke iibhanki ezinkulu zehlabathi.
Ukuba kufuneka utshintsho lwezinga lugqitywe, umzekelo, nayiphi na enye yeebhanki eziphambili eziphambili: i-ECB, iBhanki yaseJapan, i-Fed kunye ne-Bhan yase-UK yase-England, ngoko ulungiso lungahle lube nempembelelo enkulu ekusebenzeni kwembini yemali.
umzekelo: Masithi ukuba i-Fed ibonisa ukunyuka kwe-0.25% kwizinga le-USA inzala, ngoko ke i-dollar iya kuphakama ngokumalunga neyona nto inkulu kunye nabaninzi babo ontanga. Abatyalomali baya kubuyela kwiidola njengoko kugwetywa njengokuba kunika izinga elingcono lokutshala imali.
Ngendlela elula, ukuba ufumana i-0.5% inzala kwi-akhawunti yokulondoloza, kwaye utyalo-mali kwi-dollar, kwi-USA yokugcina imali ye-dollar ngezinga le-0.75%, libonakala lixabisekileyo kwaye lingabonakala libe lukhulu .
Kukho ezinye iinkalo ngokubhekisele kwizinga leebhanki eziphambili, umzekelo, ithuba lokuxhaphaza oko kuthiwa "ukuthwala amathuba okuthengisa".
Acurrency ithwala urhwebo isicwangciso apho umtyalomali uthengisa imali ethile, ngezinga lentengo elincinci kwaye usebenzisa iimali zokuthenga imali ehlukeneyo, evumela inzala ephezulu. Umrhwebi usebenzisa le siqhinga uzama ukuthatha umahluko phakathi kweerhafu. Esi sikhala sinokubakho ngokubanzi, kuxhomekeke kwinqanaba lokusetyenziswa. Sifumana imizekelo elula yokuqhuba intengiso kwindawo yethu yangaphambili yeemakethi; ukuba sicinga ukuba idola liya kuphakama malunga ne-euro, ngoko siya kufutshane ne-EUR / USD.
Kungakhathaliseki ukuba i-short-term gain can be found as a central bank rate adjustment rate is applied, it's long term gain, by investors who often "be swing traders" izigqibo kwiibhanki eziphambili. Olu hlobo lwabathengi beengcali banokuthi bajike okanye baphathe isikhundla sabo sexesha elide kwiibini ezahlukeneyo zemali, ngokumalunga nokulungiswa kwezinga lomyinge. Baya kufaka amashishini ambalwa ngonyaka, kwaye bathengise kuphela xa ibhanki ephakathi iguqula irhafu yayo.
Fumana iRhafu yeBhanki yeNtengo